I-DELL Ultrabook ene-GNU / Linux Yonjiniyela | Kusuka kuLinux
I-DELL Ultrabook ene-GNU / Linux Yonjiniyela
UCharlie-Brown | | I-GNU / Linux, Izaziso
Ekugcineni, izindaba ezinhle!. Kakade ngoMeyi odlule uDELL wayenakho kumenyezelwe ukuqala kwephrojekthi ye-Sputnik ehlose ukusebenzisa umugqa wamakhompyutha aphathekayo nge-GNU / Linux njengokujwayelekile, kugxile konjiniyela abaphakamise ukulindela ngaleso sikhathi; Yebo, sekuvele kuyinto engokoqobo namuhla.
Izolo i- noticia en PCWorld, ebimboze eyakho lanzamiento e-US nase-Canada. Imishini okukhulunywa ngayo, enegama le- I-XPS 13 Developer Edition, I-ultrabook enesikrini esingu-13-intshi, iprosesa ye-i7, i-8GB ye-RAM kanye ne-disk state eqinile engu-256GB, engena emakethe ngentengo engu- $ 1,549 USD efaka unyaka ongu-1 wokusekelwa ngochwepheshe nokuthi bathembisa ukuthi kuzoba etholakala kwezinye izimakethe ekuqaleni konyaka ozayo.
Ngokusho kwe-DELL, ekucushweni nasekulungisweni kwale mishini, imibono yabahloli yacatshangelwa, eyabavumela ukuthi bathole umphumela ongcono, yebo, ukufeza lokhu basebenze ndawonye neCanonical kanye nabanye onjiniyela.
Uma kunokuthile okungikhuthazayo kulezi zindaba, ngukuthi konke kubonakala kukhombisa ukuthi abathuthukisi bemithombo evulekile sebevele baba yingxenye ebalulekile yemakethe yabakhulu, okulungele thina sonke abasebenzisa ngandlela thile ye-GNU / Linux, noma ngabe iyiphi i-distro okukhulunywa ngayo.
Ngakho-ke uma uziphathe kahle kulo nyaka ungacela uSanta enye yalawa ma-ultrabook, okungenani ngimamaka ikhophi yalokhu okuthunyelwe ukubona ukuthi uyakuqaphela yini ...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-DELL Ultrabook ene-GNU / Linux Yonjiniyela
Kubiza kakhulu, futhi. Ngiyazi ukuthi abaningi bazofuna ukungithumela esigxotsheni, kepha umuntu angathola iMacBook Air engaphansi. Kuyamangalisa ngempela. Akukho okungajwayelekile ukuthi iLinus ayigqoke eyodwa.
Kungenza ngibe yimfucuza ukulungisa umshini omkhulu hhayi ukufaka ikhadi levidiyo!
Bheka ukucaciswa kwemishini esizeni se-DELL, angikwazanga ukukwenza noma ukubeka isixhumanisi kubo ngoba ukuxhumana kwami ​​namuhla kubi kakhulu kangangokuba bekungenakwenzeka. Noma kunjalo, ama-ultrabook ochungechunge we-XPS ngokuvamile anehluzo ezinhle kakhulu.
Kungenxa yabathuthukisi, kuze kube manje angikamboni unjiniyela odinga amandla wehluzo amaningi 😉
Kuze kube manje angikamboni unjiniyela osebenzisa Ubuntu! i-xD
Abaningi bayakwenza, empeleni iningi labo engibaziyo.
Okwe-ultrabook kuhle ukuletha i-intel hd 4000. Ngaphezu kwalokho, amabhodi we-intel yiwona asekelwa kakhulu ku-linux, abashayeli bahlala isikhathi eside ngaphambi kokuba ama-chips afike emakethe Ngaphezu kwalokho, lawa machipsi wehluzo enza kahle kakhulu maqondana nokusetshenziswa, futhi Uma ungafuni ukudlala, awudingi okuningi.
$ 1,549 USD? Ngabe kuyiqiniso ukuthi kuyabiza kakhulu nge-Ubuntu kunaleyo ene-Windows?
iqiniso ngokuphelele. Ngicabanga ukuthi kwenzelwa ukuthengiswa okuphansi okungenzeka. Iqiniso ukuthi, ngaleyo ntengo, kungcono ngiyithenge ngeWindows, okungabiza kancane, bese ngivalelisa amawindi.
Ezintweni ezinjengalezo angikaze "ngithenge" lowo mkhankaso kaDell ngithanda iLinux noma Ubuntu ... bathengisa amakhompyutha weLinux okuthiwa ashibhile kepha cha, abiza kakhulu kuneWindows, okuyi ... WTF!
Kepha amawindi ashibhile kuwo wonke ama-software wesithathu awaxhasayo, funda i-adobe (i-flash, isifundi), i-oracle (java), i-norton, njll.
Kuphambene, yonke leyo software ibangela ukuthi intengo yemishini inyuke. Leyo software ayinikiwe noma ixhaswe nganoma yini, ivele ibize kakhulu. Ngokwesilinganiso, cishe i-10% yenani eliphelele lekhompyutha yilokho amalayisense esoftware ephetheyo okufanelekile.
Ikhompyutha engahambisani namalayisense esoftware kufanele ishibhile, uma kungenjalo, kunokuthile okuxakile okubandakanyekile.
Kulezi zimo, engicabanga ukuthi abafuni ukwenzeka ukuthi umthengi uyawubona umehluko. Uma ikhompyutha ishibhile kakhulu ngokungabi nayo iWindows ephethe i-hardware efanayo, ngubani ongathenga ikhompyutha ngeWindows? Cishe akekho. UDell akanandaba nalokhu okwenzekayo ngoba yize izinkampani zesoftware zingakuxhasi ngandlela thile ukuthengiswa kwemishini, zinikela ngamalayisense abo ngentengo ephansi yokuthenga ngobuningi. Uma uDell ezinikele ekuthengiseni imishini ngaphandle kwesoftware yayo, lezo zinkampani zizoyeka ukwenza lokho kuncishiswa, amanani entengo wamalayisense azokhuphuka, okusho ukuthi izindleko zemishini ezibaphethe noma umkhawulo wenzuzo ephansi kaDell.
Okuthi, ngamafuphi, kube ngumkhonyovu, bashaja okuningi, mahhala.
Sizobona. Uma inkampani efana ne-norton ikhokha ukuze ivele ekufakweni kwangaphambili kwe-linux cishe nezinyanga eziyi-X zesilingo. Intengo yekhompyutha ingancishiswa ukuze ibe nokuncintisana kakhulu futhi ngenxa yalokho i-norton isesimweni esihle somsebenzisi sokuthenga ilayisense kuyo. Lokhu kunwetshelwa kumalayisense amaningi esoftware yikho okuvumela ukwehliswa kwamanani futhi iMicrosoft ikwenza noma nge-software yayo, ifaka kuqala i-MS Office, i-Skype, njll.
Kepha akusilo uxhaso noma ukwehliswa, inani eliphelele lemishini liyakhuphuka njalo, esikhundleni sentengo ephelele yamalayisense ukhokha kancane kancane ngokuba yivolumu ephezulu yokuthengisa, kepha akunasikhathi lapho kusho ukwehla kwentengo i-Hardware kepha okuphambene nalokho.
Akuzona izinkampani zesoftware ezikhokhelayo ukufakwa eqenjini, ezihlala zikhokhelwa ngumsebenzisi, noma ngabe zingavumi ukubatshela ukuthi ziyabiza ngokweqile.
Ikhokhwa ngumsebenzisi onquma ukukhokhela ilayisense lokungahlaziyi, futhi ngamanani anawo, kuyinzuzo kubo ukuthi bakhokhe ukuze kufakwe isoftware yokuhlola, ngoba ikhokhwa ngempumelelo ngabasebenzisi… hhayi nje konke.
Impendulo ilula kakhulu.
Isoftware Yamahhala ayisho ukuthi Mahhala futhi uma ibiza kakhulu kune-Winbugs kungenxa nje yokuguqulwa okwenziwe ukuthi kuhambisane nedell, ngoba hhayi abahloli kuphela abasebenza kuyo kodwa futhi basebenza nabasebenzi, abasebenza kubo inkampani enkulu futhi kufanele ikhokhele lezo zisebenzi, zimboza izindleko empeleni ngoba lokho inkampani ezenzela kona kubiza kakhulu, noma ngabe kulula kangakanani, esikhundleni sokubeka ezinye izinkampani (i-flash, i-adobe, njll.) ezenzayo Umsebenzi omningi futhi kushibhile ukuwukhokhela ukwenziwa kunokwenza wena ngokwakho.Kusobala ukuthi ngikhuluma ezingeni lenkampani ngoba ezingeni ngalinye kuphambene.
Okuza namawindi kunokunye ukucaciswa. Lokhu kubiza kakhulu ngoba kuza ne-hardware engcono.
Akukona kangaki ukuthi uhlelo lokusebenza luchaza uma lubiza kakhulu noma lushibhile futhi iningi lilonke i-laptop ene-Linux izobiza kakhulu kune-Windows, kusobala ukuthi uzoba nezinkinga ezimbalwa nge-Linux. Ngicabanga ukuthi intengo iyenyuka ngoba ikhwalithi yomkhiqizo iyakhula.
Kusukela ekuseni siletha uchungechunge lokugxekwa nokuthukwa olubhekiswe kuDell, ngoba lo mshini ubiza kakhulu ama- $ 50 nge-ubuntu kune-W $. Ngokusobala ihlobene nesivumelwano se-M $ ne-Dell. Njengoba uDavid wakwa-EMSLinux engitshele, i-8GB yenqama iningi kakhulu (ngaphandle kokuthi ungumdlali wegeyimu). Ngine-Dell XPS 15 enama-gigabyte ayi-6 kaRam kanye nomsebenzi wokuthuthuka okwengeziwe, kube nzima kakhulu ukusebenzisa i-3GB. Ikhompyutha ibiza kakhulu. Abantu abaningi bancamela ukusindisa ama- $ 50, basuse i-W $ bese bebeka i-distro yabo abayithandayo.
Abantu base-DELL abafuni ukuthi umthengi aqhathanise. Awukwazi ukubeka amasethingi afanayo phakathi kweWindows ne-Ubuntu, umehluko wenani esivuna iCannonical awukuvumeli. Ngabe ufuna i-GNU / LINUX? Sithengele i-ULTRA XPS nangendlela esinezithameli ngayo: I-Freak Hardocore LinuxSESSUAL!
Ubuntero, yilokho kanye ebengikusho ngomshini.
i7, i-8GB RAM, i-256GB SSD… ..lokhu okwenzelwe umdlali, hhayi umqambi, ikakhulukazi uma kukhulunywa nge-OS nenani le-RAM.
ongeyena umdlali, unjiniyela ochwepheshe.
Umthuthukisi okhokhelwayo kanye noMlawuli weDatabase onale hardware enjalo angakhawulwa kakhulu.
Isibonelo: Lo mshini wawuyi-core i5 4gb 512 GB ye-HHDD enamawindi Xp, wawucotha kancane kune-core i3 yami ene-Windows 7 ka-4gb wenqama.
Ngiyazi ukuthi bobabili babenamawindi kodwa eyodwa kwakuyi-XP enye ingu-7. Mhlawumbe, kepha kuthathe isikhathi eside ukuqala ngenxa yenqwaba yolwazi ebinalo nezinombolo zezinhlelo ezakhiwe ngeVB.NET obekungeyona nje into engiyikhumbulayo ispredishithi esinesibonisi esifana naleso seMicrosoft Office 5 sasilinganisa i-2007gb ngaphandle kokuba ilayishe idatha. Ngikhuluma nawe mayelana neminyaka emi-1 noma emi-2 eyedlule kusobala ukuthi onjiniyela abasha namuhla badinga okuningi hhayi ngqo ukudlala. Futhi abakhi bezakhiwo nonjiniyela bayasilela ngomshini one-3 gb yenqama.
I-OJO ”inikezelwe konjiniyela nomphakathi ochwepheshile onentengo yesethenjwa”
Futhi kusukela nini Ubuntu indawo yokuqamba yabathuthukisi? Uxolo ngokuvelela kwami ​​ngombuzo wami, kepha angibheki Ubuntu njenge-distro yonjiniyela ngoba Ubuntu buphatha isimo samakhosombe afriziwe isikhathi esiyizinyanga eziyisithupha.
Lokho kusho ukuthi uma ngingumakhi wePython noRuby noma we-PHP futhi kwenzeka ukuthi kuvele uhlobo olusha lwalezi zilimi uma ngiku-Ubuntu kufanele ngilinde inguqulo elandelayo ye-Ubuntu ezophuma jabulela inguqulo entsha, ngenkathi iseFedora noma i-Arch kumane nje kuyindaba ye- "sudo yum update" ne-voila, manje usungasebenzisa izinhlobo zamanje zamaphakeji nezilimi zokuhlela.
Kungakho ngithi Ubuntu babathuthukisi abuhambi! ..
Ubuntu ingeyomsebenzisi wokugcina, umsebenzisi onobungane oxhuma kwi-Intanethi ulalela umculo futhi abuke amavidiyo ... Uma ufuna ngempela ukuthuthuka, kungcono ushintshele ku-distro enamandla athe xaxa ngokuvuselelwa kwamaphakeji nezilimi.
Isizathu sonke emhlabeni, i-Fedora noma i-OpenSUSE ... Ngelinye ilanga ngizobhekana ne-Arch ... Ubuntu bude KUMQONDO WAMI ekubeni yingxenyekazi yentuthuko.
Ima mfowethu…! Akunconywa njalo ukuthi kunezinguqulo zakamuva, ngakho-ke isibhamu asiyi lapho. Onjiniyela abadingi ukuthi basebenzise izinhlobo zakamuva ezizinzile kepha ezejwayelekile; Endabeni yePython, Ubuntu 12.10 iza ngokuzenzakalela nge-3.x futhi empeleni, indinganiso esetshenziswa cishe yonke indawo, noma ekuboshweni kwayo ingu-2.7; UFedora usasebenzisa i-2.7 futhi unenguqulo 3.x ezindaweni zakhe zokuphumula, njenge-Ubuntu.
Eqinisweni, ungamangala inani lamaphakeji entuthuko uBuntu anawo nabanye angenawo: node.js, CoffeeScript, npm, izinto eziningi, eziningi ezingadluli ngisho nasemqondweni wakho ...
I-Arch yokuthuthukisa? Kungcono ukusika iqanda, kuyacasula kakhulu futhi kuvuselele kakhulu, ngakho-ke ukugcina indawo ezinzile (ngomqondo wezinguqulo) akulula njengoba abanye bekholelwa.
Imvelo ezinzile? Ubuntu? kahle, kuya ngenguqulo kunoma yikuphi, i-12.04 iphelele, i-11.10 ne-12.10 pfffff, kungcono ingasaphathwa, kusukela ekuhlulekeni kokuqala okumsulwa, kepha ngisho ukuthi lapho ufuna ukuthola khona ngohlelo, uhlale wazi ukuma ye-Ubuntu, umsebenzisi wokugcina, yize kungasho ukuthi ezinye izinto zingenziwa, yize ngokwami ​​ngincamela ukusebenza i- "Fedora - CentOS - OpenSUSE" (ukwabiwa engikusebenzisela ukuqapha ukuqaliswa: I-Nagios, i-Nagvis, i-PNP, i-Centeron, i-Cacti, njll.) kube ngcono kakhulu futhi kuzinzile, izikhathi ezimbalwa ezizame nge-ubuntu - debian (okumsulwa nokulula) noma olunye uhlelo olususelwa ku .deb, ngibe ukwehluleka ngokuphelele.
Manje, njengoba kusho uNano, maqondana nokunambitheka, imibala.
PS: I-Arch angikaze ngiyizame, angazi noma iyavilapha, isikhathi, ukwesaba, yize ngibona ukuthi baningi abaluxazulule udaba lweDistro-hopping. Ngelinye ilanga…
Ngabe leyo i-12.04 inguhlobo oluzinzile lwe-Ubuntu, izinhlobo eziphakathi phakathi kwama-LTS's zingaba ngaphansi kwezimbungulu njengoba iCanonical yethula izinto eziningi zokuhlola.
Ngithuthukisa eFedora. Ukuthuthuka ku-arch kungaba yinkinga enkulu, ngiyakuqinisekisa xD
Cha. Izinhlobo ze-LTS yizinhlobo zoBuntu njenganoma iziphi ezinye, umehluko ukhona ngqo ekusekelweni okweluliwe, ngoba okuyisisekelo kukhiqizwa ngasikhathi sinye futhi ngaphansi kwezimo ezifanayo nezinye izinhlobo, ukuze bakwazi ukwethula izinkinga ezifanayo njenganoma iyiphi enye inguqulo. Ngemuva kwezinyanga eziyi-8, 10, 12 noma ezingama-24 kamuva, ngenxa yezibuyekezo ebeziqhubeka, kufanele zizinze kakhulu kunezinguqulo eziphakathi, kepha akukho okunye, ilebula le-LTS alisho ukuzinza okungokwemvelo kepha isikhathi eside sokusekelwa, Isikhathi sihilela ukubuyekezwa okwengeziwe, okuqhubeka ngokuhamba kwesikhathi kube yinguqulo ezinzile yoBuntu.
Unephutha, futhi uma ungakukholwa, lifunde ku-wiki:
1. Sigcina kakhulu ukuhlanganiswa kwephakeji ne-Debian, ukuvumelanisa okuzenzakalelayo nokuhlolwa kwe-Debian, esikhundleni se-Debian engazinzile.
2. Siqala ukusimamisa ukukhishwa kusenesikhathi ngokunciphisa kakhulu inani lezici ezintsha. Sizokhetha ukuthi iziphi izici esiziphakelayo ekukhishweni kwe-LTS, ngokuqhathanisa nalezi esizishiya ngaphandle bese sizivumela abasebenzisi ukuthi balande ngokuzithandela futhi bazisebenzise kusuka kungobo yomlando ehlukile.
3. Gwema izinguquko zesakhiwo ngangokunokwenzeka, njengokushintsha isethi ezenzakalelayo yezinhlelo zokusebenza, ukuguqulwa okuningi kwelabhulali, noma izinguquko zesendlalelo sohlelo (isibonelo: ukwethula i-KMS noma i-hal → i-DeviceKit bekungeke kube izinguquko ezifanele ku-LTS).
Ngamafuphi, zilondolozeka ngokwengeziwe kumaphakeji azethulayo, lapho zisuka kunguqulo engeyona eye-LTS ziye enguqulweni ye-LTS zigxila ekuqiniseni amaphakheji hhayi ekwethuleni izici ezintsha nokugwema izinguquko zesakhiwo lapho kungenzeka khona.
«12.10 pfffff, kungcono ungakhulumi»
Ngibe nenhlanhla ngaleso sikhathi, iseva yasekhaya esebenzisa Ubuntu Server 12.10 (yokuhambisana ne-multifunction) kuze kube manje iphelele, ibinama-2 noma amabhuzu amathathu selokhu ngiyivuselele kusuka ku-12.04 LTS futhi kube isikhathi sokuphumula sezinsuku ezingama-37.
Ngingu-asshole: 17, izinsuku eziyishumi nesikhombisa nesikhombisa zesikhathi sokuphumula 😛
Akunjalo, okungenani hhayi njalo. Intuthuko ivame ukwenziwa ngokumelene nenguqulo ethile, kungaba yipython, ruby, java noma yiluphi ulimi. Futhi leyo nguqulo imvamisa inezinga elithile lama-patch; kufanele kube nesizathu esihle kakhulu sokusebenzisa izinhlobo zakamuva. Ngithuthukisa i-python futhi sisebenzisa izinhlobo eza ne-Debian 6, okuyilokho okutholakala kumaseva wokukhiqiza. Eziteshini zokusebenza kunezinguqulo eziningana ze-Ubuntu ne-Debian Testing (ngokuya ngokuthanda ngakunye), ngezinhlobo ezihlukile ze-python,
kepha kufanele siqiniseke ukuthi isebenza ngePython 2.6 okuyikho okukhiqizwayo.
Uqinisile ukuthi ukuhlolwa kwe-debian kungcono noma i-archlinux okungcono ukukhishwa okukhiphayo. yingakho kungekho fedora. XD
Unjani? Ngicabanga ukuthi uzoba nobuntu ngesivumelwano esithile neCanonical, angazi nakanjani.
Konke okunye, susa ubuntu bese ufake i-distro yakho oyithandayo
Ukuphawula ngokujwayelekile, iqiniso liyinkimbinkimbi ngandlela thile, kulungile kuyabiza, kepha othile kufanele aqale ukwephula ama-paradigms; noma ngale ndlela ngikungabaza ukuthi kuzokwenziwa, kufanele ngivume ...
Kunezinketho ezinhle kakhulu, abakhiqizi banganikela ngemishini efinyeleleka futhi wonke umuntu angakha isoftware yakhe ye-distro azikhethele yona, Ubuntu ngokuqinisekile, mhlawumbe uFedora noma uSuse bangavula i-niche yokuba yizinkampani ezinethonya, kepha hhayi njenge-Canonical esikhaleni esivamile sokuhweba .
Ngokwalokho engikubonayo, ngicabanga ukuthi izinkampani ezincane kufanele zinikeze ama-Ultrabooks wezindleko eziphansi ezinhlobonhlobo, zenze ama-laptops azo aphezulu naphansi, zigxile kuzo ... unkulunkulu mkhulu kakhulu, kangangoba ngingabhala ngakho. Sizobona ukuthi yini ephuma.
Ekugcineni behlise intengo yaba ngu- $ 1449 njengoba kungabonakala ekhasini lokunikezwa: http://www.dell.com/us/soho/p/xps-13-linux/pd
Ake sibone, ukuze singaphenduli imibono ngazinye ngizozama ukwenza okufingqiwe:
@DanielC: Uma ubheka kahle, ukucubungula nge-Ubuntu ne-Windows akufani ncamashi, Ubuntu buza ne-8GB ye-RAM futhi uma unenkinga yokubheka izixhumanisi zezindaba zokuqala ku-PCWorld, uzobona ukuthi lokhu kwanda i-RAM yenziwe ngokunembile ngokwesicelo sonjiniyela ababesebenzisa amakhithi wokuhlola. Akukaze kushiwo ukuthi lokhu kulungiselelwa okwenzelwe abadlali bamageyimu, futhi YEBO, abathuthukisi abangochwepheshe badinga leyo hardware ukusebenza futhi abaningi babo bazovuma ukukhokha intengo yemishini ngoba kubo kuyindlela yokusebenza, hhayi ukuzijabulisa . Ngokwengeziwe, kukhona ukumiswa kwesisekelo okuphuma ne-4GB futhi kushibhile.
@Mllti: Empeleni uzakwethu uXykyz uqinisile kulokho akushoyo, imvamisa abanikazi bayo yonke i-junk software eza ekufakweni kwangaphambi kokufakwa kweWindows bakhokhela umkhiqizo ukuyifaka, qaphela ukuthi zonke izinhlobo "zokuzama" zisetshenziselwa ukujwayela ukusetshenziswa kwazo bese uphoqeleka ukuthi ukhokhele amalayisense okusebenzisa. Ngaphezu kwalokho, iMicrosoft isolwa ngokuba nezivumelwano eziyimfihlo nemikhiqizo emikhulu okusolwa ukuthi izosho ukukhokhwa yiMicrosoft ukusebenzisa iWindows ukulimaza noma iyiphi enye i-OS, ngeshwa lokhu akukaze kufakazelwe kuze kube manje.
@Xykyz: Ngivumelana ngokuphelele neziphakamiso zakho.
@Alf: Ngokubona kwami, futhi lokhu kucatshangelwa nje kuphela, kubonakala enkingeni yokuhlela iqembu nge-GNU / Linux, u-DELL bekufanele akhethe i-distro yayo, noma ngabe ikuphi, ukumisa iqembu lilonke empeleni kusho ukusebenzisana phakathi amaqembu, lapho bobabili kufanele benze izinqumo zokuphatha ukufeza inhloso ehlongozwayo. Kunoma iyiphi inqubo yalolu hlobo, kubalulekile ekuthatheni izinqumo, futhi ngokwazi kwami, ukuphela kwe-distro okungenzeka kube yi-Ubuntu, ngoba inesakhiwo sokuphatha esinaleso sikhala, kuyilapho amanye ama-distros, njalo, wenza izinqumo ngokubambisana nangokuvumelana, okuzibambezelayo. Ngicabanga ukuthi lokho kuyisihluthulelo esenza Ubuntu kube yi-distro ekhethiwe, yize ngingakhuphi ngaphandle amathuba ezinye izinhlobo zezivumelwano phakathi kwe-DELL neCanonical.
@nano: Siyavuma ukuthi kuhle kakhulu ukuthi uphawu olufana ne-DELL luqale ukwephula ama-paradigms, kepha angicabangi ukuthi luzophela ngomzamo ohlulekile. Kuyadingeka ukuthi unake imininingwane eyodwa: isigaba semakethe iqembu elibhekiswe kulo elibhekise kulo, onjiniyela abangochwepheshe, sizobona ukuthi basabela kanjani.
Mayelana nentengo, kuyiqiniso ukuthi kungabhekwa njengokuphakeme, kepha qaphela ukuthi iyi-ultrabook, futhi angazi noma iyiphi imishini kulesi sigaba eshibhile, hhayi kuphela yalolu hlobo, hlola ku-HP, Samsung, njll., Futhi indawo lapho amanani ahamba khona ifana kakhulu.
Manje, kunesici ngombono wami esithandeka ngokwedlulele futhi okulandelayo: kusuka ezingxenyeni eziyinhloko zehadiwe zalokhu kulungiselelwa, ngisho i-base chipset (chipset), imishini ehambelana ngokuphelele Ubuntu 12.04, enezishayeli ezihambisanayo, ngakho-ke, kusuka kulokho kulungiswa okwaziwayo, akunzima kakhulu ukuthola amanye amakhompyutha ashibhile avela kulo mkhiqizi ofanayo, abelana ngokuhlelwa okufanayo kwehadiwe, ngokuqiniseka okuphelele ukuthi bazosekela Ubuntu. 12.04, njengoba bekwazi ukusebenzisa abashayeli abafanayo. Eqinisweni, esikhathini esithile esidlule ngaphoqeleka ukwenza lokhu kuhlaziywa ukukhetha ama-laptops we-HP, kuphrojekthi eyayidinga ukwesekwa kwe-GNU / Linux futhi ngakwenza kusukela ekucushweni kwesisekelo semodeli ethile umenzi aqinisekisile ukuthi unabashayeli , ukufezekisa ukuthi ekugcineni kusebenze ngaphandle kwezinkinga kumodeli engiyikhethile, ehlukile kunaleyo "eqinisekisiwe" yi-HP.
Uxolo ibillet, kodwa ngizamile ukuphendula iningi lamazwana, nonke, ngiyabonga kakhulu ngokuma futhi nangemibono yenu ngoba konke kuneqhaza ekuqondeni kangcono lezi zinkinga.
ILaptop eneLinux ibiza kakhulu kuneWindows futhi ngentengo yeMacBook
Thinta ikhala lakho …… Dell
Angiwuthandi lowo mkhiqizo.
Yebo, nami angiyithandi kakhulu, kepha mayelana nokuthandwa akuxoxwa ngakho ...
Siyabonga ngokudlula lapha
Intengo ukuphela kwento engingayithandi nhlobo, kepha noma kunjalo, isinyathelo esihle soMthombo Ovulekile: D!
UPaulo carmona kusho
Ngethemba ukuthi kuyisango lokuthola amathuba angcono wezwe le-Linux. Kungenzeka yini ngelinye ilanga ukuthenga ilaptop enhle ngaphandle kwe-OS? Ngokusobala ngentengo enhle kakhulu.
Phendula uPaulo Carmona
Kunemikhiqizo eminingi ethengisa amamodeli ngaphandle kwe-OS ngineGigabyte q1105m, Intel su4100, 4GB yenqama ne320GB HDD. USD $ 360. Ngiyisebenzise ngeFedora 15 neWindows 7. manje ngine-Asus N53SV, i5 engumbala, 8GB inqama, i-GT540m 1GB DDR3, i-750GB HDD hybrid.
Kubuye kwafika ngaphandle kwe-SO USD $ 1000. Ngiyisebenzisa nge-fedora 17 namawindi 7. UDell ubuye anikeze okufanayo nokuningi angikukhumbuli.
Izinqamuleli zekhibhodi ku-Elementary OS
I-Graphite_Elementary: Itimu yami yokuqala ye-Dekorator